Fumana yonke into malunga nomhla wokungabi nonyango - Ihlabathi leMatshi
Fumana konke malunga nosuku lokungabi nonyanzelo
Ikhaya » Fumana konke malunga nosuku lokungabi nonyanzelo
Ubundlobongela obusetyenziswa njengesixhobo sokusombulula iimbambano ezithile kwimbali kuye kwabangela iingxaki ezinzulu ekuhlaleni phakathi kweenkcubeko ezahlukeneyo nempucuko. Okwangoku, imibutho eyahlukeneyo isebenza imihla ngemihla ukukhuthaza ukubonakala kwamacandelo ahlukeneyo enza iziganeko ezinje imini yokungabi nonyango kunye neentsuku ezifanayo, ezihambelana nesi sihloko. Kuwo wonke unyaka sinokufumana iintsuku ezahlukeneyo ezijolise ekudaleni iingxaki ezifuna ukubonakala. Phakathi kweentsuku ezinxulumene nobundlobongela ungafumana iziphambili ezifana nomhla wamazwe ngamazwe ongenalo uxolo.
Imbali iye yaqulunqwa ngenxa yezimfa, iingxaki ezingapheliyo kunye nokuphulwa kwamalungelo oluntu. Izikumkani ziye zadalwa ngenxa yokubhujiswa kwabantu, ukuphulwa kwenkululeko kunye nokugqithiswa kobomi babantu. Ngokuxhomekeka kwimiba yembali yenkcubeko iye yakha izakhiwo ezahlukeneyo zoorhulumente kunye neengcinezelo, kwaye nangona kukho amanqanaba amaninzi amaziko aphuhlise ama-arhente ekukhuthazeni kwamalungelo, kuye kube namaqela aseleyo ngaphandle kwemida esemthethweni, ebangela ukuba ukukhutshwa kunye nobudlova kubo.
1 Ziziphi iintsuku zokungabi nonyango?
2 2 Oktobha: Usuku lwaMazwe ngamazwe loKhuselo
2.1 Kutheni unomhla wokungabi nonyameko noxolo?
3 Ngomhla kaNovemba 25 ngosuku lokungabi nonyanzelo kubasetyhini
3.1 Isizathu sokuba khona kwalo mhla: Usuku lukaNovemba lwe-25 lokungabi nonyanzelo kubasetyhini
3.2 Kutheni ukukhuthaza ukubhiyozelwa kwelanga likaNovemba le-25 ukungabi nonyanzelo?
4 NgoJanuwari 30 usuku lwesikolo sokungabi nonyameko noxolo
4.1 Kutheni usuku lokungabi nabundlobongela noxolo olubhiyozelwa kwi-30 ngoJanuwari ekhethwe ezikolweni?
5 I-19 kaNovemba ngosuku lwehlabathi ngaphandle kobundlobongela kubantwana nolutsha
5.1 Usuku lwangaphandle lokungabi nonyango kunye nokuthintela ukuxhaphazwa ngokwesondo kunye nokuxhatshazwa
5.2 Iimpawu zobundlobongela kwabantwana
6 Ingxelo yokugqibela kwimihla yamazwe ngamazwe obundlobongela ekungabikho komthetho
7 ISpeyin ikhokela umhlaba wonk
Ziziphi iintsuku zokungabi nonyango?
Intlalo ntshukumo edibeneyo usuku lwamazwe ngamazwe lokungabi nonyango Zininzi. Kwaye zininzi iintsuku zokungabi nonyanzelo kwikhalenda, zijoliswe kumacandelo ahlukeneyo, njengale:
Usuku lomntwana ongenalo uxolo
Usuku lwe-25 lokungabi nonyameko kubasetyhini
Usuku lwamazwe ngamazwe olungabikho kolwaphulo-mthetho, olufumaneka ngo-Oktobha lwe-2
I-30 kaJanuwari, uSuku lweSikolo soKhuseleko olungasifanelanga ukudibanisa nosuku lokungabikho komfutho
Usuku lwaMazwe ngamazwe loKhuselo noxolo.
Bade ukusebenza kwiinkalo ezahlukeneyo zenkqunto ke, ingqalelo imigudu yabo ekulweni ubundlobongela kumacandelo ahlukeneyo yaye injongo efanayo: ithuba ophela nayiphi na indlela yobundlobongela obukhoyo ehlabathini, yenze uxolo sifinyelele kumacandelo omhlaba, kwaye ngoko ke abemi banjalo banakho amalungelo kunye nemisebenzi efanayo
2 Oktobha: Usuku lwaMazwe ngamazwe loKhuselo
Usuku lwamazwe ngamazwe ongenalo uxolo Oktobha i-2 ikhunjulwa, njengoko kufike ixesha ukubhiyozela ukuzalwa kukaMahatma Gandhi. Kwaye okokuba ifilosofi yeGandhi isekelwe ekusebenziseni intetho yeengxoxo ngokusombulula nayiphi na ingxabano.
Yayingunyaka 15 2007 June, xa United Nations General Assembly wathi ngesindululo 61 / 271, 2 Oktobha ukuba akukho ubundlobongela wayeza kuba imini ekhethiweyo. Olu suku non-ubundlobongela iye yasetyenziswa njengenkokheli ihlabathi ukuba ukukhumbula abantu ezahlukeneyo abadumileyo abaye nzima bonke ubomi babo ukuze uluntu bubuhle.
Kutheni unomhla wokungabi nonyameko noxolo?
Inkcubeko eyenza usuku lwehlabathi lwe-Nonviolence ijoliswe njengolukulwela amalungelo oluntu kunye noshintsho lwentlalo, kuba oko kuhloswe kukugcina ubomi bomntu usebenzisa uxolo njengesixhobo.
Abaninzi bayazibuza ukuba yintoni imini yokungabi nonyanzelo, kwaye kutheni usuku lokuthula nokungabi nonyango lufunwa. Kwaye ke ukuba ngokweengcali zinoMhlaba wamaZwe woNyango, unceda ukudala ukuqonda jikelele malunga nokusetyenziswa ngokugqithiseleyo kobundlobongela kwisisombululo seengxabano phakathi kwamazwe naphakathi kwazo.
Ngoko ke October 2 imini non-ugonyamelo, lithuba lokuba imibutho eyahlukeneyo ukulawula iziganeko ezibonisa ugonyamelo kakhulu ehlabathini, bobabini ngqo subliminally. Ukuze ibango namhla wokungabheneli ngokubonakalayo uyakwazi inxaxheba imingcelele walungelelanisa kwihlabathi liphela, okanye ukujoyina imibutho abasebenza kwisakhiwo ukudala imini yoxolo wokungabheneli ngokusebenzisa izixhobo nokuhlanganiswa kunye nentlonipho.
Ngenxa yesi sizathu, ukuba ufuna ukuthatha inxaxheba kwi-Oktobha ye-2 yokungabi noluvo lwemihla ngemihla eyahlukeneyo eyenzekayo kwiidolophu nakwizixeko, kukulungele ukuya kumbutho onxulumene usuku lokungabi nolwaphulo kunye noxolo kwaye unikezele ukusebenza kuzo.
Kubalulekile ukuba uqaphele umhla, ekubeni kuqhelekile ukuba udideke ucinge ukuba nguNovemba ye-2 yehlabathi lonke lokungabi nonyango, xa kufuneka sigxininise, ukuba yi2 ka-Oktobha. Kwaye ngamanye amaxesha ufumana ulwazi olungalunganga kwi-intanethi engakhokelela ekudidekeni.
Ngomhla kaNovemba 25 ngosuku lokungabi nonyanzelo kubasetyhini
Esi sihloko esinye sesona sifanelekileyo kwaye ngoku sikwimeko yomhlaba wonke. Isizathu kukuba ubundlobongela bujoliswe kubasetyhini ngenye yezibetha ezenza kube nzima kwimpucuko ukuqhubela phambili ngokubambisana.
El I-25 kaNovemba imini yomhlaba wonke ngokuchasene nobundlobongela kwabasetyhini, kuhloswe ukuba kubonakale yonke imodeli yobundlobongela esetyenziswa kweli qela kwaye ngezihlandlo ezininzi zidelelwe okanye zithule.
Isizathu sokuba khona kwalo mhla: Usuku lukaNovemba lwe-25 lokungabi nonyanzelo kubasetyhini
Ubundlobongela kwabasetyhini luquka izenzo kunye neemeko ezifana nobudlobongela besini, ubundlobongela obundlobongela, ukuxhatshazwa, ukudlwengulwa okanye ukungalingani kwemali, phakathi kwabanye.
Zonke ezi meko kubandakanya ukuba abafazi babonwa enasilela ngeendlela ezininzi kuthelekiswa ebantwini, okanye abafumene iindima isini nje kuba ngabafazi, njengoko nendima umkhathaleli okanye asithandayo.
Kutheni ukukhuthaza ukubhiyozelwa kwelanga likaNovemba le-25 ukungabi nonyanzelo?
Ubundlobongela obusekwe kwizesini zesini ngenye yezona zixhaphake kakhulu, ukulwa nalo. Ngonyaka we-1993, iSibhengezo sokuPhelelwa koBundlobongela kwabaseTyhini sakhishwa yiNdibano yeZizwe eziManyeneyo. Kwaye kucatshangelwa ukuba ukuze kugqitywe ibango le Imini ye-25 yokungabi nonyanisekileyo noxolo Kuyimfuneko ukuba bobabini amantombazana kunye nabasetyhini (abathi ngokwesiqhelo bangaphezu kwesiqingatha sabantu behlabathi) baphile ngaphandle koloyiko, ngaphandle ubundlobongela basekhaya, kuluntu olukhuselekileyo nolungileyo kubo.
Kwaye ngoxa liyinyaniso elokuba ekubeni 25 Novemba 2017 ubundlobongela baye baqala ukuba inkqubela ekukhuliseni ulwazi ngalo mba de amalungelo ziyaphunyezwa, abaninzi cinga ukuba iinkampani zehlabathi ukuba ngaba ziqhubela phambili kakuhle nangokulinganayo kulenza yokuziphatha, esekelwe kwiinqobo kokulingana kunye nokunyamezelana.
NgoJanuwari 30 usuku lwesikolo sokungabi nonyameko noxolo
NgoJanuwari 30 usuku lwesikolo lokungabi nolwaphulo kunye noxolo Ukukhunjulwa kokufa kukaMahatma Gandhi, owayengumphathi wesizwe kunye nokomoya waseNdiya, ugujwa. Le mini ibhiyozelwa ukususela ngonyaka we-1964, kodwa bekungekho unyaka we-1993 xa i-UN iyayibona.
El NgoJanuwari Usuku lwaMazwe ngamazwe lweNgcaciso 30, izenzo ezahlukeneyo zenziwa ezikolweni ukukhuthaza uxolo emhlabeni. Kuyinto eqhelekileyo kulolu suku lwesikolo olungengobundlobongela nokuthula ukwenza imisebenzi, njengaye usuku lwebali loxolo kunye nokungabi nonyango, okanye iingoma eziphathelele uxolo nazo ziyavunywa kwaye zivusa imeko ehlala kwilizwe okanye kwindawo ethile ehlabathini.
Kutheni usuku lokungabi nabundlobongela noxolo olubhiyozelwa kwi-30 ngoJanuwari ekhethwe ezikolweni?
Le mini ikhethwe ngamagumbi okufundisa ukwenza imisebenzi eyahlukeneyo nabantwana. Ezi ntsuku zihlala zigcinwa kuwo wonke umntwana kunye nendawo ephambili, kwaye kuhloswe ukuba abantwana bayayazi amanani abamele ukunyanzela nokuthula. Phakathi kwamanani amaninzi abameleyo nguMahatma Gandhi, uNelson Mandela, uMaria Maria Teresa waseCalcutta okanye uMartin Luther King.
Kubalulekile ukuba ukususela ebuntwaneni sisebenzisana nabantwana abaselula kunabo bonke kwihlabathi lokungabi nonyanzelo, kwaye zonke iintsuku ezibandakanyeka kwikhalenda ehambelana nomhla woxolo kunye nokungabi nonyango, njengolu suku lwamazwe ngamazwe ngokulwa nogonyamelo 25 November, the I-2 Oktobha ngosuku lokungabi nonyango kunye noxolo okanye usuku lwesikolo lokungabi nonyango kunye nokuxhatshazwa.
I-19 kaNovemba ngosuku lwehlabathi ngaphandle kobundlobongela kubantwana nolutsha
NgoNovemba 19 yiyo Usuku lomntwana kunye nolutsha olungenalo uxolo, kuhloswe ukuba kubonakale ukusetyenziswa kakubi komncinci. Kwakukho ngonyaka we-2000 xa lo suku luchongiwe ngokungagqibekanga ukwenzela ukuba kusetyenziswe amanyathelo angxamisekileyo kwaye asebenzayo yi-States. Ukongeza, uNovemba 20 ukhunjulwa ngokusebenzisana kwiSuku lwaBantwana bamaZwe ngamazwe.
Olu suku non-ubundlobongela abantwana isetyenziselwa ukuphakamisa ulwazi malunga yintoni na ubuchule zixhaphakileyo kakubi abantwana yaye yintoni izixhobo abazisebenzisayo ukunika alarm abadala besithembe ukuba zibangqongile.
Usuku lwangaphandle lokungabi nonyango kunye nokuthintela ukuxhaphazwa ngokwesondo kunye nokuxhatshazwa
Ukusetyenziswa kakubi nokuxhaphazwa kwabantwana kunye nabantu abatsha yingxaki echaphazelekayo kumazwe ngamazwe. Kwaye okokuba lolu hlobo lokusetyenziswa gadalala alukwazi ukwahlula uhlanga, ilizwe, inkcubeko okanye isimo sezenhlalakahle.
Los amacala okusetyenziswa gadalala kunye nogonyamelo kubantwana zenze imimandla yemibutho kunye neenkqubo zorhulumente ziqala ukuthatha amanyathelo, kwaye ziphumeze iinkqubo zemfundo kunye ne-alamu, ukwenzela ukuba ezi ziko zenziwe zaziwe kwaye zinokusungula iinkqubo zokuthatha isenzo kuzo zonke iinkalo: iintsapho, isikhungo semfundo njengendawo yokuzonwabisa .
Iimpawu zobundlobongela kwabantwana
Iingcali zakha uluhlu lwezibonakaliso eziqhelekileyo ezinokufumaneka kubantwana nakubantu abaselula xa bexhatshazwa okanye bexhatshazwa kakubi:
Izimpawu zomzimba: umonakalo kwimimandla esondeleyo, njengokuphuma kwegazi, ukuvutha okanye ukusuleleka.
Izimpawu ze-Psychic: ukwesaba, i-phobias, iimazi zobusuku, ukulala okungapheliyo. Ukuziphatha kakubi okanye ukuhlaziywa kwizakhono sele zifumene.
Ukuziphatha kwangaphambili ngokwesini, ukuvukela kwintsapho kunye nesikolo, ukusebenza kobugcisa obubi.
Esi sikhokelo senzelwe ukuba amalungu omndeni, abahlobo okanye ootitshala bakwazi ukufumana iimpawu ezincinci zokuxhaphaza ngaphandle kokuba baxelele ngento ngomlomo.
Ingxelo yokugqibela kwimihla yamazwe ngamazwe obundlobongela ekungabikho komthetho
Ngelishwa, kubonakala ngathi lonke ixesha lizwe lobundlobongela, ngenxa yeengxabano ezikhoyo kwihlabathi, kunye nazo zonke izigwenxa ezenziwa kuzo zonke iindawo, nokuba zibonakala ziphucukileyo okanye cha.
Ngokuxhomekeke kwenkcubeko yelizwe ngalinye kunye nokuqhubela phambili okanye ukuphazamiseka kumalungelo analo, unemizekelo eyahlukeneyo yobundlobongela ingabonwa. Abantu abaninzi banokucinga ukuba kumazwe athuthukileyo bekungekho mfuneko yokubhiyozela usuku lomhlaba ngokuchasene nokungabi nonyanzelo, kuba bacinga ukuba akusekho okanye ukuba akukho nto okanye ayifanelekanga.
Kodwa ke ngelishwa ke eyahlukileyo, ubundlobongela yinxalenye umntu kunye ukuphelisa oko kuqala kuyimfuneko ukuphakamisa ulwazi lobukho babo, kunye nombono okuphuma iimeko, yaye yintoni uthathwa ubundlobongela.
ISpeyin ikhokela umhlaba wonk
ISpeyin lizwe libhekwa njengehlabathi lokuqala kwinkosi yaseburhulumenteni yintando yesininzi, kunye nomgaqo-siseko othi ukhusela kwaye unikeza amalungelo kubo bonke abemi bawo.
Kodwa inyaniso kukuba kuyo yonke imbali yakutshanje yeli lizwe kuye kwaba neemeko zobundlobongela obukhulu, zombini ngokucacileyo nangokucacileyo. Ubundlobongela basekhaya (usuku lwayo ngobudlova be-25 kaNovemba) luhlala luneengxaki ezinkulu ezikhukula kuluntu.
Uye wahlala izigaba apho ubunqolobi basabisa ubomi bemihla abemi balo. Phakathi leentshukumo zoqhankqalazo i inkxalabo enkulu leyo eye nombono ngqo kuye 1 Oktobha ubundlobongela esenzeka nase-, ngenxa lwezimvo ukuba iyekwe yi omkhosi wokhuselo lowo ngamandla nontombi abemi. Ngenxa yesi sizathu i Usuku Lwehlabathi Lobugqwetha 2017 Kwakubaluleke kakhulu.
Ukuba umntu ucinga ukuba iSpeyin yenye yeyona nkcubeko ephucukileyo kakhulu, kwaye nangona kunjalo, ukuhlaselwa okuninzi kuyenziwa malunga namalungelo nokukhuselwa kwabantu ngabanye, kulula ukucinga ukuba kwenzekani kwamanye amazwe anamazinga aphantsi okanye angenanto yedemokrasi okanye wangena emfazweni.
Kuzo zonke izizathu kukho imibutho ekhuthaza ukulwa kwamalungelo abantu, njengoko kunjalo Ihlabathi likaMatshi ngoMatshi noxolo, abasebenza ngonyaka ngeminyaka, ukusazisa abantu baseburhulumenteni kunye noorhulumente babo ngokubaluleka kokungasebenzisi ubundlobongela.